Sintomy ny Trello ary milamina | Famoronana an-tserasera
Beatrice Hernani | | General
Tamin'ny lahatsoratro farany dia niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fandaminana ireo tambajotran-tseraserako aho, zavatra iray izay tena ilain'ny olona ahy ny marina ary ambonin'izany rehetra izany dia manana fotoana bebe kokoa ho an'ny tenako aho ary olana iray izay tsy dia mampatahotra ahy loatra intsony.
Amin'ity lahatsoratra ity dia te hiresaka aminao momba an'i Trello aho, fampiharana iray izay nanomboka nampiasaiko tamin'ity herinandro ity ary manampy betsaka ahy izany mandrindra ny asako amin'ny ankapobeny.
Izaho dia nanao lisitr'ireo asa tsy maintsy nataoko foana ary niampita azy ireo tahaka ny nataoko azy ireo, izany no Trello, fa amin'ny findainao. Toa fitaovana iray tena ilaina amiko ho toy ny fomba fandaminana io ary manome tombony maro ho antsika koa. Toa fitaovana tsara ihany koa ny fampiasana azy roa ho ekipa na tsirairay.
Lazaiko anao ny sasany amin'ireo tombony azo avy amin'ny fomba fijeriko:
Fantaro izay asan'ny mpiara-miasa aminayAmin'izany fomba izany, dia ho fantatsika ny asan'izy ireo ary ho hitantsika raha afaka manampy azy ireo isika na izany, ny mifanohitra amin'izany aza dia afaka manampy antsika izy ireo.
Ora manisa mandra-pahoviana no hanaovana ny tetikasa tsirairay.
Mazava ho azy fa mahafinaritra izany fitaovana fandaminana, tsy isan-kerinandro ihany, fa isam-bolana ihany koa.
Mamela antsika miampita asa isan'andro vita indray mandeha.
Podemos mandefasa hafatra amin'ireo mpiara-miasa aminay.
Afaka mamorona ihany koa isika tabilao samy hafa, izay ahafahantsika manana birao iraisana miaraka amin'ny mpiara-miasa ary iray manokana, izay ahafahanao manoratra ireo asa tokony hataonao, toy ny fividianana mofo.
Afaka mamorona isika fanairana fampitandremana.
Amin'ny lafiny faharoa, azontsika atao ny manamboatra ny fiaviantsika tsirairay avy amin'ireo takelaka misy antsika miaraka amin'ireo sary mihetsika tsy misy fotony na mampakatra ny sarinay.
Herinandro voalohany amiko amin'ity fampiharana ity, azo ampiasaina amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny fampiharana na amin'ny solosaina na finday. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mampifanaraka azy amin'ny kalandrie, inona no mbola angatahinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Sintomy ny Trello ary milamina